အစိုးရ/မရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Politics, Issues » အစိုးရ/မရ	19
Posted by ဇီဇီ on Mar 11, 2016 in Politics, Issues, Society & Lifestyle | 19 comments
စိတ်ထဲရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်း ရေးချင်။
စိတ်ထဲ သွားသလောက် လက်က လိုက်မရှင်းပြနိုင်၊ လိုက်မဖော်ပြနိုင်တာမို့ ရောက်တတ်ရာရာလေး ပြောအူးမယ်။
ကိုယ်တွေက ရှင်ဘုရင်ခေတ်ကနေစလို့ ကိုလိုနီခေတ် မဆလ နဝတ ကနေ ခု ကသစ (ကသေးစိမ်) ခေတ်ထိက အကြောက်တရားနဲ့ နေခဲ့ နေသားကျခဲ့တာမို့ အစိုးရဟေ့ ဆိုရင်ကို ….
ဘုရင်မျိုး မှတ်ပြီး ကြောက်ရမယ် စိတ်မှာ စွဲနေကြတာ။ အစိုးရ ဆိုတာ ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်မယ် အပြစ်ပေးမယ် ထောင်ထဲထည့်နိုင်တယ် စသည်ဖြင့်လောက်ပဲ တွေးနိုင်နေသလိုဖြစ်နေကြလို့သာ။
ကိန်းသေ/ကိန်းရှင်ပုံစံနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် …
ပြည်သူက ကိန်းသေပါ။ ပြောင်းလဲလို့ မရဘူး…
အစိုးရဆိုတာ ကိန်းရှင်ဖြစ်ရမှာ။ .
နောက်ပြီး ဥပဒေဆိုတာ ကိန်းသေပါပဲ။
ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ၊ လိုက်နာရမဲ့ ဥပဒေ ကို မကြောက်နိုင်ပဲ အစိုးရဆိုတာကို သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်အမှတ်နဲ့ မှားကြောက်နေရတဲ့ ဘဝက ကယ်တင်ဖို့ The Lady က လုပ်နေရတာ ကြည့်တတ်ရင် မြင်နိုင်တာပဲဟာ။
အဲဒါကြောင့် သူ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူက ခိုင်းရမှာ …
ခိုင်းနိုင်တယ်။ ပြည်သူ အတွက် အမှုထမ်းရမှာ။
ဒါကိုမှ အစိုးရလူကြီးမင်းများဆို ဖား၊ အနားကပ်ပြီး အခွင့်အရေးတောင်းဖို့ လောက်သာ စဉ်းစားနိုင်နေရင်တော့ ကွကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြပေါ့။
ပြည်သူ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး မပေးနိုင်ခဲ့ရင် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းမှာ ပြန်လည်ဖြုတ်ချနိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ကျနော်တို့လက်ထဲကို The Lady က ပေးခဲ့တာပါပဲ။
ခုချိန်မှာတော့ ဒီ စံနစ် ကျင့်သားရသေးမှာတော့မဟုတ်။
ကိုယ်တွေက မဆင်းမျိုး မဖယ်ပေးမျိုး မျက်နှာပြောင်မျိုးတွေချည်း တွေ့ရတာမို့ အစိုးရဆိုတာ တစ်ခါတက် ငါ့ တစ်သက်လို့ပဲ မြင်နေကြအူး မှာပါပဲ။
မကြိုက်တာကို မကြိုက်ကြောင်း ပြောခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူ…
ကိုယ်ဆောင်လိုက်တဲ့ အခွန်တွေ ဘယ်ရောက်သွားတုန်းဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နိုင်မဲ့ ပြည်သူ..
ကိုယ့် မဲ တစ်ပြားက ကိုယ် မကြိုက်သူကို ဖြုတ်ချခွင့်၊ ကိုယ့် အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ကို ရွေးချယ်ခွင့် အပြည့်ရှိတယ် ဆိုတာ သိတဲ့ ပြည်သူ…
ဒီ မဲ တစ်ပြားကို လိုချင်မှုအတွက် အစိုးရကရော အတိုက်အခံကပါ အပြိုင်အဆိုင် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် လုပ်ပြတာမျိုး မြင်ရတော့မဲ့ ပြည်သူ….
………………………………………………………………………..တွေ အဖြစ် ရောက်နေပြီ။
အာဏာသိမ်းတယ် ဆိုတာ အမှန်တော့ နာစရာပါ။
သူတို့ အချင်းချင်းထဲက သိမ်းယူတယ် မမှတ်ပါနဲ့။
ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူတွေဆီက သိမ်းယူတာမျိုးပါ။
အခွင့်အာဏာ ဆိုတာလက်ထဲမရှိတာ အတော်ကြာတဲ့ ပြည်သူနင်းပြား အနေနဲ့က သမ္မတဆိုတာလည်း ဘုရား တစ်ဆူ ဂူတစ်လုံးလိုမျိုး ကိုးကွယ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတာလည်း အကျင့်ပါပဲ။
ဒီက စ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို အစိုးရလုပ်အုပ်ချုပ်မဲ့ လူတန်းစားသည် ဘာပညာတွေ တတ်သလဲ ဘယ် အရာတွေမှာ တော်သလဲ စိစစ်လို့ရပါပြီ။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေသည် ဘယ်လိုပါလို လက်မထောင်ခွင့်ရရှိသော ပြည်သူတွေ ဖြစ်လာပြီပေါ့။
အစိုးရ က မဟုတ်တာတွေ ပြည်သူက ထောက်ပြခွင့်ရှိတဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ အစိုးရဆိုတာသည် ရှင်ဘုရင်မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အသိလေး အရင် ဝင် ရရင်ကို တော်ပါပြီ။
kai says: ပြောလေ…
ပင်နီလည်းမ၀တ်ဖူးလို့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ပြောပေါင်။
အာ့ဒါ ကျနော်တို့ သမ္မတ။
Thint Aye Yeik says: အမေစု ပင်နီ မဝတ်တာ ဘာကြောင့် ? ဆိုတာလေး ဖြေရှင်းထားတာကို ဖတ်မိပြီး သဘောကျနေတာ
ပင်နီဟာ NLDရဲ့ သင်္ကေတဝတ်စုံ/ NLD ကို ကိုယ်စားပြုလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေက ဝတ်ကြတာ။
NLD ဥက္ကဌလည်း ဖြစ်/ လူထုခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့
ဒီ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုမယ့်သူမို့
အဖွဲ့သင်္ကေတကို ရှောင်ပြီး အားလုံးကို ခြုံငုံ ကိုယ်စားပြုမယ့် မြန်မာဝတ်စုံ/တိုင်းရင်းသား ဝတ်စုံတွေကို ဝတ်နေတာဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်လေးလေ။
အခု ဦးထင်ကျော်ကြီး ပင်နီ မဝတ်လည်း အပြစ်မပြောဘူး။ သူက တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက်သွားမယ့်သူ ဆိုတော့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ ပိတ်မိမနေတာကိုတောင် ကျေနပ်သေး။
.နောက်ပြီး. . .
အခု ဦးထင်ကျော်ကြီးကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးပြလိုက်တော့ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတာက. . .
.အမေစု ကြိုးကိုင်လို့ ရသည် မရသည်/ကြိုးကိုင်သည် မကိုင်သည်ဆိုတာ နောက် ထား ပေတော့. . .
သူဟာ အမေစု ကြိုးကိုင်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကို သူ့ဘာသာ လွှတ်ထားလည်း ကကြိုးကကွက် မမှားအောင် ကမယ့်သူ လို့
ခင်ဇော် says: ဘယ်သူတက်လို့ ဘယ်ဝါ ခိုင်းလို့ ဆိုပြီးးး နေ့ချင်းး ညချင်းး ပြောင်းလဲဖို့ လုံးဝ မမျှော်လင့်ဘူးးးး
ပြည့်သူ့ အာဏာ ပြည်သူ့ လက်ထဲ မှာ ပဲ ရှိနေတယ် ဆို တဲ့ စိတ်နဲ့ အလေ့အကျင့် အတွက်
သေချာတွေးးးကြည့်ရင် ကိုယ်ပေးးခဲ့ တဲ့ မဲတပြားးရဲ့ အကျိုးးဆက် ကို မြင်ရတယ်..
Ma Ma says: NLD ပါတီဝင်တိုင်း ပင်နီဝတ်ကြပြီး အမေစုဘာ့ကြောင့် ပင်နီမ၀တ်သလဲဆိုတဲ့စိတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။
အခု အဖြေသိရတော့လည်း ကျေနပ်မိပါတယ်။ မျိုးရိုးအနေနဲ့ပဲ ကြည့်မလား၊
နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံကိုပဲ ကြည့်မလား၊
သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုပဲ ကြည့်မလား၊
(ဒါတွေက နေ့ချင်းညချင်း လုပ်ယူလို့ရတာတွေမဟုတ်ဘူး)
နောက်ဆုံး ဥပဓိရုပ်ကိုပဲ ကြည့်မလားးးးးးး
ဦးထင်ကျော်ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာကို ကျေနပ်တယ်။ သမ္မတအမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုက်တာနဲ့ ဒရိုင်ဘာလို့ ခပ်နှိမ်နှိမ် ရေးကြ ပြောကြတာကို အခြားသူတွေက ဒေါသထွက်ကြပေမယ့်…………
ကိုယ့်အတွက်တော့ အဲဒါကို သိလိုက်ရလို့ ပိုပြီးတောင် လေးစားမိသွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ပြည့်သူ့ အရေးးဦးစားပေးတဲ့ သမ္မတ က
ကြိုးဆွဲ သမ္မတဖြစ်မယ်ဆိုရင် တောင် ကြိုးးဆွဲနိုင်သူ က ပြည်သူတွေပါ ..
နာ စရာ မရှိပါဘူးးလို့…
kai says: တိုင်းရင်းသားခရစ်ယန် ကို….ဒုသမ္မတခန့်လိုက်တာလေးတော့.. တော်တော်လှ….
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်နဲ့.. ကျိန်စာကို ဒေါ်စုသိများနေသလားမသိ…။
သာဓု…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: မဘသ နဲ့ တော်တော်အဆက်ပြတ်နေပုံပဲ…
အခြားသူအချို့ရဲ့ ယုံကြည်မှု့နဲ့ ဒဲ့ လဲရတာ….
Thint Aye Yeik says: NLD ဒု-သမ္မတလောင်းရွေးပုံ ကန်ပညာရှင်တွေ ကြိုဆို
11 March 2016 06:28(+0630) (၁ ရက် ခန့်က)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ဒုသမ္မတ အမည်တွေ တင်သွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး – မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေအဖြစ် အမေရိကန် အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူတွေက ကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို နေရာပေး ခန့်အပ် လာတာဟာလည်း ထူးခြားမှုတခု အဖြစ် သူတို့က ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ် သတိထား ကြိုဆိုခဲ့ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်းက ပြောပြပါမယ်။
သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ – မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က NLD ကနေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဦးထင်ကျော်ကို ဒုသမ္မတအမည် တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ချင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ဟင်နရီ ဗန်ထီးယူ ကို ဒုသမ္မတအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းရေး အကဲဆတ်လွန်းတဲ့ ကာလမှာ သတိထားဆောင်ရွက်နေရ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ဆိုခဲ့သူကတော့ – Carnegie Center က အာရှရေးရာ အကြီးတန်းသုတေသီ Vikram Nehru ဖြစ်ပါတယ်။
“သေချာပေါက် အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဦးထင်ကျော်ဟာဆိုရင် အင်မတန်မှာ ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ယုံကြည် အားကိုးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူဟာ အင်မတန်မှ ချဉ်းကပ်ရ လွယ်ကူတဲ့သူ၊ လူတွေသဘောကျတဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် လွှတ်တော်နဲ့ မြန်မာလူထု ရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှုနဲ့ အုပ်ချုပ်နိုင်မယ့်လူစားမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ ယူဆပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သူဟာ ချင်းတိုင်းရင်းသား တဦး ဖြစ်နေတာ ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကို လက်ကမ်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတာဟာလည်း ရှင်းပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် သမ္မတအထက်မှာ နေမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ NLD ပါတီ အစိုးရကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်၊ မတူကွဲပြားတဲ့ အုပ်စုတွေကို စုစည်းနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့ အစိုးရတရပ် ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့လည်း Vikram Nehru က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ George Washington တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ခရစ်တီးနား ဖလင့်ခ် ကလည်း – သင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ ယူဆသူပါ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဦးထင်ကျော်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက လက်တွဲလုပ်ဆောင်လာသူဖြစ်ပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိနိုင်ဖို့နဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် နိုင်ဖို့လို သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် စိန်ခေါ်ချက်တွေကတော့ ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပါမောက္ခ ခရစ်တီးနား ဖလင့်ခ်က သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ချင်းတိုင်းရင်းသား ဟင်နရီ ဗန်ထီးယူ ကို ရွေးချယ်မှုလို အရေးပါတဲ့ ရာထူးနေရာတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ခန့်အပ်လာတာဟာလည်း ရှေ့ဦးလက္ခဏာ ထူးခြားမှုတခုအဖြစ် Vikram Nehru ရော၊ ပါမောက္ခ ခရစ်တီးနားဖင့်ခ် ပါ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အထိ ကြိုးစားမှုလို့ သူတို့က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက တပ်မတော် အကြီးအကဲကိုလည်း ကရင်တိုင်းရင်းသားတဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့တာကို သတိယမိပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့၊ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရမယ့် အစိုးရတရပ်ကို သူ့အနေနဲ့ ယုံကြည် တယ်ဆိုတာကို ဖခင်ဖြစ်သူ လက်ထက်တုန်းကလို ပြသလိုက်တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။”
ပါမောက္ခ ခရစ်တီးနားဖင့်ခ် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၅၃ (စ)အရ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ နောင်တက်လာမယ့် သမ္မတရာထူး အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမည်တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ် အများက စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း တနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာဖို့ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း Carnegie Center က အာရှရေးရာ အကြီးတန်းသုတေသီ Vikram Nehru ကတော့ အခုလို ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“စစ်တပ်အနေနဲ့ အခုအချိန်အထိတော့ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ပြုလွယ်ပြင်လွယ် လုပ်ချင်တဲ့ပုံမျိုး စစ်တပ်ဘက်က ပြသတာ မရှိသေးဘူး ဆိုတာကို သတိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မကြာခင်ကာလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာနိုင်အောင် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ လက်ခံထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အချိန်ကာလတခုမှာ နှစ်အတော်ကြာကြာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ NLD အစိုးရအနေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှုတွေ ရလာတဲ့ အချိန်မျိုးမှာတော့ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။”
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ကတော့ တည်ငြိမ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့နဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်လာဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်နိုင်ပြီး၊ အခုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာလည်း တည်ငြိမ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံသွားမှာပါလို့လည်း ပါမောက္ခ Chritina Fink က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: မည်သို့ဖြစ်စေ….
စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ခုလို အနေထားထိ
လေးစား ချီးကျူး ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက် မဆုံးပါကြောင်း
ဘသူမှ လိုက်မမီ ပါကြောင်း
ဘသူ့ အထက်မှာပဲ ရှိနေ ရှိနေ
သူမအထက်မှာ ပြည်သူတွေကို ဦးထိပ်ပန် ထားတယ်ဆိုတာ
ဦးမြောက်မြောက်က ပြောဒယ်လို့ ပြောပေးဘာ
ခင်ဇော် says: မှန်ပါတယ်။
ပို့(စ) ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သိချင်ရင် ဦးမြောက်ရဲ့ ကော်မန့်ကိုသာကြည့်ပါလို့။
uncle gyi says: အခုကအစိုးရကကိန်းသေဖြစ်နေတာ
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်
နှစ် ၅၀ ကိန်းသေနဲ့ တွေ့ခဲ့တော့ အခု အရပ်သားအစိုးရကိုလည်း ကိန်းသေမှတ်ပြီး ဇွတ်/စွတ် ပြောနေကြလို့။
Ma Ei says: ဒေါ်စုက သမတ အထက်ကနေကြိုးကိုင်မှာမို့ အရုပ်သမတ ဘာညာနဲ့ မလေးစားပြောကြသတဲ့
အဲ့လူတွေ ပြောသလို အရုပ်ဆိုရင်လဲ စာဖတ်သူကြီးရဲ့ အရုပ် နှလုံးသားမရှိသူနဲ့ မယှဉ်နိုင်
ပြည်သူတွေ အတွက် စဉ်းစားပေးတဲ့ ပိုင်ရှင်ဆိုဝေး လာ ဝေးပါကွယ်
ခင်ဇော် says: အရုပ်ဖြစ်ကြေးဆိုရင်
ဘယ်သူ့ အရုပ်ဖြစ်ချင်တုန်းပဲ အနည်းဆုံး အရင် တွေးမိတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည် သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကတော့ ခရစ်ယာန်ဒုသမ္မတကို ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးနေချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘက်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာကို ဖတ်ရတာ တော်တော်ကြီးကိုရှက်မိကြောင်း
.စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကို ဘာသာ၊ သာသနာစော်ကားမှုနဲ့ထောင်မကျကျအောင်ချတုန်းကတစ်ခါ
.အပေါ်ကယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says သလိုပဲ..ဒေါ်စုအကွက်ချထားပုံတွေက
.နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အံ့သြမဆုံးဖြစ်နေရတုန်းပဲ..လက်ဖျားပါမက ခြေဖျားပါခါတယ်
ခင်ဇော် says: စိတ်ညစ်ပါ့။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ပညာရှိ အများကြီးရှိတာ က မလုံလောက်ဘူးး
ငပိန်း တစ်ယောက် လောက် ရှိရင်ကို တိုင်းပြည်ပျက်နိုင်ဆိုတာ ဟုတ်မှာ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂျီးဒေါ်နွားကျောင်းခင်ဇော်
ဟီးကျော်ဖားလောင်းရွှင်ပျော်..
ခင်ဇော် says: ကိုယ့်ဂျီးတော်ရဲ့ နွားတွေ ကိုယ်မကျောင်း ဘူ ကျောင်းမတုန်းး